Ministera Aterineto - Famerenana ny pulpit
Mark N. Posey, Tonian'ny famoahana
I Mark dia nanompo ho minisitry ny polipitra tao amin'ny Fiangonana Church of Austinville nanomboka tamin'i 1994. Manana mari-pahaizana avy amin'ny Oniversiten'i Freed-Hardeman izy, ny Oniversite Lipscomb ary ny Seminera Reformed. Raha tao FHU dia izy no nahazo ny biraon'ny Guy N. Woods ho fitoriana. Nampianatra ny kilasy fianarana Baiboly tany amin'ny Kolejy Valley Valley, Institut Christian Christian College, ary ny Faulkner University izy. Nanao asa fitoriana tany amin'ny Nosy Karaiba sy Eoropa Atsinanana izy. Manao fampianarana betsaka sy mitory any Okraina isan-taona izy. Mitory amin'ny fivoriana filazantsara efatra ka hatramin'ny enim-bolana izy isan-taona ary miresaka momba ny lahatenin'ny mpirahalahy sy ny seminera. Izy no talen'ny seranam-piaramanidina Morgan County ao amin'ny Camp Maywood Christian ao Hamilton, AL ary manompo ao amin'ny birao mpanolo-tsaina. Miara-miasa akaiky amin'ny programan'ny Lads amin'ny Leaders izy.
Fito fahafito ny fitiavana!
Ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra! Zava-dehibe no nataony!
Nahoana Isika no Tokony Hatahotra An'Andriamanitra?
Fomba hanorenana fiangonana miorina mafy orina!